SAWIRO:- Raysal Wasaaraha cusub ee Itoobiya oo la dhaariyey – Madal Furan
Hoy > Warka > SAWIRO:- Raysal Wasaaraha cusub ee Itoobiya oo la dhaariyey
SAWIRO:- Raysal Wasaaraha cusub ee Itoobiya oo la dhaariyey
Editor April 2, 2018 Warka 0
Madal Furan – Baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa Ra’isul Wasaaraha cusub ee dalkaasi maanta u doortay Abiy Axmed oo kasoo jeeda Qowmiyada Oromada ee dalka Itoobiya, waxaana isla maantaba Abiy AXmed loo dhaariyay xilkaasi.
Ra’isul Wasaaraha Cusub ee dalka Itoobiya ayaa markii la doortay kadib Khudbad uu u jeediyay Baarlamaanka, waxa uuna uga mahad celiyay sida ay ugu doorteen in uu noqdo Ra’isul Wasaaraha Cusub ee Itoobiya.
Waxa uu sheegay Ra’isul Wasaaraha cusub ee Itoobiya in uu la imaan doono isbadal muuqda, waxa uuna sheegay dimuqraadiyadda curdanka ah ee Itoobiya ay horseeday in ay muwaadiniin dhintaan sannadihii u dambeeyay.
Abiy Axmed ayaa ugu baaqay Siyaasiyiinta mucaaradka iyo Qurbo joogta Itoobiya in laga wada shaqeeyo Nabada iyo horumarka Itoobiya, waxa uuna ka codsaday in is afgarad lagu wada shaqeeyo.
Waxa uu sidoo kale sheegay Abiy Axmed ayaa sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay in ay Eritrea kala shaqayso sidii loo xalin lahaa muranka u dhaxeeya labada dal iyada oo lawada xaajoonayo.
Ra’isul Wasaaraha cusub ee Itoobiya ayaa ahaa hogaamiyaha xisbiga Oromo People’s Democratic Organization (OPDO) oo ah mid ka mida afarta xisbi qawmiyadeed ee uu ka koobanyahay isbahaysiga talada dalka haya ee Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF).
Qormooyin la Xiriira
Madaxweynaha Jabuuti oo ku marti geliyey Raysal Wasaaraha Itoobiya, isticmaalka dekedda Dooraale
Waare oo ka digay inuu dhaco Shir Madaxda dowlad goboleedyadda oo Hirshabeelle aaysan qayb ka aheyn.
Nin Booliska ka tirsan oo Muqdisho lagu dilay maanta
Daawo: Siyaad Bare oo si qoto dheer uga sheekeeyey sababtii ay isku qoonsadeen Gen. Gabeyre
Editor March 27, 2019 March 28, 2019
Miisaaniyadda gaarka ah ee madaxweyne Deni ugu tala galay gobolka Sool ma horumar ayaa loo adeegsan doonaa mise xoreynta gobolkaas?
Editor February 19, 2019 February 19, 2019
Faallo:- Maxaa sababay in Shacabka Somaliland ay 21kii sano ee Kacaankii Siyaad Barre rumeystaan inay guranayeen mirii Janadda?
Editor January 31, 2019 February 2, 2019
Faallo:- Galgalashada siyaasadeed ee Madaxda Isbahaysiga Maamulada Goboladda oo waayey saaxiibadii naftoodu harsaneysay
Editor October 22, 2018 October 22, 2018